Roseola (ရိုစီရိုးလာ) - Hello Sayarwon
Dr. May Myat Hnin Aung မှ ရေးသားသည်။ 09/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Roseola (ရိုစီရိုးလာ) ကဘာလဲ။
Roseola ဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် အန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲ ကောင်းစွာအနားယူခြင်း၊ ဆေးသောက်ခြင်းတို့ဖြင့် ပျောက်ကင်းသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါးအချို့လူနာများမှာတော့ အဖျားကြီးပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေပါတယ်။
Roseola (ရိုစီရိုးလာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာအလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ /လမှ ၂နှစ်အရွယ် ကလေးများမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ၄နှစ်နောက်ပိုင်း ဖြစ်သူရှားပါတယ်။ ကလေးအများစုဟာ သူငယ်တန်းတက်ချိန်မှာ roseola ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Roseola (ရိုစီရိုးလာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီး တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်း ရောဂါလက္ဓဏာပြလေ့ရှိပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ နည်းနည်းပဲပေါ်တာနဲ့ လုံးဝမပေါ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Roseola ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့-
ဖျားခြင်း။ အဖြစ်အများဆုံးကတော့ ရုတ်တရက်အဖျားကြီးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ၃၉.၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ပိုဖျားတတ်ပါတယ်။ အချို့ကလေးတွေမှာ အဖျားနဲ့အတူ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ နှာစေးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လည်ပင်းမှာရှိတဲ့ ပြန်ရည်ကျိတ်များ ကြီးနေတာကိုလည်း မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဖျားဟာ ၃ရက်မှ ၅ရက်အထိ ကြာတတ်ပါတယ်။
အရေပြားမှာ အနီပြင်ထွက်ခြင်း။ အများစုမှာ အဖျားပျောက်ပြီးမှ အနီပြင်များလိုက်ထွက်လာပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အရေပြားမှာ အနီစက် သို့မဟုတ် အကွက်လိုက်ပေါ်နေနိုင်ပါတယ်။ အကွက်တွေဟာ အပြားရော အဖောင်းရော ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့အစက်တွေပတ်လည်မှာ အဖြူရောင်အကွင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အနီပြင်တွေဟာ ရင်ဘတ်၊ နောက်ကျောနဲ့ ဗိုက်ကနေ လည်ပင်းနဲ့ လက်မောင်းတွေအထိ ပြန့်သွားတတ်ပါတယ်။ ခြေထောက်နဲ့ မျက်နှာအထိ ပြန့်ချင်မှ ပြန့်ပါမယ်။ နာရီအနည်းငယ်မှ ရက်အနည်းငယ်ထိကြာနိုင်ပြီး ကလေးကို ကသိကအောက်မဖြစ်စေပါဘူး။
၃၉.၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ပိုဖျားခြင်း
Roseola ဖြစ်ပြီး ၇ရက်ထက်ပို ဖျားခြင်း
ကိုယ်ခံအားကျနေစဉ် roseola ရောဂါရှိသူနှင့် ထိတွေ့မိခြင်း
သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုသင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။
Roseola (ရိုစီရိုးလာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Roseola ဟာ လူမှာဖြစ်ပွားတဲ့ ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်နံပါတ်၆ သို့မဟုတ် အချို့မှာ ၇ကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ နေမကောင်းသူများနှင့် ထိတွေ့မိခြင်း၊ သူတို့ အသုံးပြုထားပြီး ရောဂါပိုးပါနေသော ပစ္စည်းများကို ထိတွေ့မိခြင်းတို့ကြောင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ နေကောင်းတဲ့ ကလေးဟာ roseola ဖြစ်နေသော ကလေးရဲ့ ခွက်ကို ယူသောက်မိခြင်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အကြီးအကျယ်ပြန့်နှံ့တာမျိုး မရှိပါ။
ကလေးဘဝက ရောဂါမဖြစ်ဖူးသူ လူကြီးများလည်း ကူးစက်နိုင်ပြီး ကျန်းမာသူများမှာ ရောဂါပြင်းထန်လေ့မရှိပါ။ သင့်မှာအနီစက်မပေါ်ဘဲ အဖျားနည်းနည်းပဲရှိနေလျှင်တောင် သင့်ကလေးနဲ့ မိသားစုဝင်များကို သင့်ထံမှ တံတွေးနှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ အရည်များမှတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Roseola (ရိုစီရိုးလာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မွေးကင်းစမှ သူငယ်တန်းအရွယ် ကလေးများမှာ ခုခံအားစနစ်ကောင်းစွာ မဖွံ့ဖြိုးသေးလို့ ရောဂါကူးစက်လွယ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် စာသင်ခန်းတွင်းရှိနေခြင်းကြောင့် ကလေးတစ်ဦးမှတစ်ဦး ရောဂါကူးနိုင်ခြေများပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်ခံရဆုံးအရွယ်ဟာ ၆လမှ ၁၅လကြား ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများမရှိခြင်းကြောင့် သင့်မှာ Roseola မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်လက်များဟာမှီငြမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Roseola (ရိုစီရိုးလာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါရာဇဝင်မေးမြန်းခြင်းနဲ့ စမ်းသပ်ခြင်းတို့မှ သိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးမှာအဖျားရှိပြီး သိသာထင်ရှားတဲ့ အနီကွက်ပုံစံကြောင့် ဆရာဝန်က roseola ဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံ roseola အတွက်ပဋိပစ္စည်းကို သွေးထဲမှာ စစ်ဆေးကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။
Roseola (ရိုစီရိုးလာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အဖျားကြီးတာ သက်သာဖို့ ဆေးသောက်ရပါမယ်။ ပါရာစီတမောနဲ့ အိုင်ဗျူပရိုဖန်တို့ကို အသုံးများပါတယ်။ ကလေးကို ရေပတ်လည်းတိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကို ဆေးဘယ်လောက်တိုက်ရမယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်ဆီက အကြံပေးချက်ယူပါ။ အသက်၂၀အောက်ငယ်သူများမှာ Reye’s syndrome ဖြစ်နိုင်ခြေကြောင့် အက်စ်ပရင် မပေးသင့်ပါ။
ရောဂါလက္ခဏာ မပြင်းထန်လျှင် ဆေးမသောက်ဘဲ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Roseola ကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် Roseola ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးမှာ roseola ရှိလျှင် အိမ်မှာပဲ အိပ်ယာပေါ်မှာ အနားယူခိုင်းတာ အကောင်းဆုံးပါ။ အခြားကလေးတွေကို ရောဂါကူးစက်ခြင်းကိုလည်း ဒီနည်းနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာရောဂါရှိလျှင်/ရောဂါရှိတဲ့ကလေးကို ပြုစုပေးနေလျှင် ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေရှိသေးတဲ့ အခြားသူတွေကို မကူးစက်နိုင်အောင် လက်ကိုသတိထားပြီး မကြာခဏဆေးပေးပါ။
သင့်ကလေးကို ရေဓါတ်မခန်းခြောက်စေရန် ရေ၊ ဂျင်းဖျော်ရည်၊ သံပုရာရည်၊ စွတ်ပြုတ်ရည်၊ ဓါတ်ဆားစတဲ့ အရည်ကြည်များ တိုက်ကျွေးပေးပါ။
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/roseola/basics/definition/con-20023511. Accessed August 12, 2016.
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/tc/roseola-topic-overview#1. Accessed August 12, 2016.